[62% OFF] Kuubno Denim Ceyriin ah & Koodhadhka Foojarka
Raw Denim Xeerarka kuubanka
10% Ka Bax Goobta Iyadoo lagu soo bandhigayo isbeddellada ugu dambeeyay maanta, RAW Denim wuxuu soo bandhigayaa jiinis qiimo leh iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah ragga oo qaab ahaan u habboon xilli kasta oo sannadka ah. Fiiri ururintayada hadda ee xayeysiisyada RAW Denim si aad u hesho heshiisyada ugu fiican ee jiinis nooc kasta, oo lagu daro jaakadaha ragga, funaanadaha, gaagaaban, kabaha, iyo in ka badan.
10% Off Dhammaan Waxyaabaha Qiimaha Buuxa Ku saabsan annaga Waxaan kuu haynaa 2 rasiidh oo rasiidh ah oo kaa caawin doona inaad kaydsato Raw Denim. Sicir -dhimisteena ugu sarreysa waa 20% off. Waxaan sidoo kale helnay koodhadh xayeysiis oo qiimahoodu yahay 10%. Koodhkii ugu dambeeyay ee xayeysiinta waxaa la helay Juun 5, 2020. Kuuboonadayadu waxay kaydiyaan dukaameysta celcelis ahaan $ 2.75 at. Denim cawlan.
10% Ka Bax Goobta Ku saabsan Denim Denbi. Waxaan helnay 5 rasiidh Raw Denim oo firfircoon oo shaqeeya. Xubnaheennu waxay kaydiyaan lacag iyagoo adeegsanaya koodhadhka qiima dhimista rawdenim.co.uk marka la bixinayo. Dalabka ugu sarreeya ee maanta Denim -ka ugu sarreeya ayaa ah Ka -helid 20% Dalab Kasta; Nambarka kuuboon ee ugu fiican ee Denim Denim ayaa kuu badbaadin doona 20%; Dukaanleydu waxay keydiyaan celcelis ahaan 17% iyagoo wata lambarrada xayeysiinta ee Raw Denim
20% Ka Bax Goobta Ku saabsan Kuuboonada Denim -ka Kariinka ah Ku hagaaji qaabkaaga shaqsiyeed jiinis rag aad u qurux badan, dhar -tolid, hurdo iyo jaakado ka yimid Raw Denim. Waxaa la aasaasay 2007, astaanta dharka UK waxay ku shaqeysaa dukaan leben-hoobiye ah iyo dukaan internet oo guuleysta oo leh jiinis denim oo gaar ah iyo dhar kaa caawinaya inaad moodadaada gaarsiiso heerka xiga.